Pancake apharathasi: amafomu, imiyalelo, ukubuyekezwa
yokudlela ibhizinisi Modern Kunzima ukucabanga ngaphandle umshini Pancake. Cishe zonke izindawo iIgama imenyu ethulwa pancake ofakwe ezahlukene. Ukuze ukulungiselela zabo besebenzisa imishini ekhethekile ukuthi ubuyisela ngokugcwele epanini ukuthosa.
Kuyini kungaphefumuli Pancake
Lokhu izinto zasekhishini ukupheka amakhekhe waffles. Pancake apharathasi ine uhlobo elikhulu disk metal othini nge zokulawula.
Izici eziyinhloko kule divayisi:
Ukushisa okusheshayo ebusweni;
ukusetshenziswa sakugcina lamafutha;
propekanie pancake iyunifomu kuyo yonke ubukhulu;
Umklamo crepe yesimanje ivumela yokuhlanza lula umshini kanye umsebenzi evele, kahle ekususeni iminonjana umkhiqizo. Sebenzisa amadivayisi enjalo yenhlanzeko kanye nama-practical.
Namuhla kukhishwa Pancake apharathasi ezinhlotsheni ezimbili eziyisisekelo: kagesi negesi. Umsebenzi wokuqala kusukela amapayipi. Izinzuzo amadivayisi abanjalo bangabaphostoli usayizi icwecwe futhi ikhono ukuzifaka kunoma iyiphi indawo lapho kukhona isokhethi. Negesi zikagesi anamekwe inethiwekhi igesi, ngakho-ke ngokuvamile efakwe endaweni eyodwa. Ngokushesha sekuqala ukufudumala ngakho ukonga ngaphezulu kuqhathaniswa nenkambiso kagesi.
Kuye ubuchwepheshe imishini ukulungiselela awushadile emaceleni futhi double Emaceleni ukuthosa.
Ngokusho inani evele ukusebenza ukuhlukanisa disc Pancake abenzi olulodwa futhi double.
Ngu uhlobo ebusweni Pancake apharathasi yilezi:
Nge engagqwali ukuthosa ebusweni.
Non stick enamathela.
Abakhi professional imishini ekhishini ekhiqizwa Pancake abenzi wokubhaka pancake round, sikwele nomumo unxande.
Izinketho Pancake imishini
isethi Standard kwemishini for pancake baking kuhlanganisa:
Block ungcwecwe ngengxube - ebusweni zokusebenza control panel.
dispenser Mechanical - ikuvumela ukukala ngokunembile inani inhlama bayobhaka a Pancake futhi kuqinisekisa ekulondolozweni test ezimweni yokuhlanzeka.
Idivaysi ekhipha test - iyithuluzi T emise lokhuni ngokulinganayo ukusabalalisa Batter kubhakwa phezu. Nge distributor uphatha pancake nezitini oyifunayo ukujiya.
Bhuka nge zokupheka.
I-apharathasi kungase ukuqhubekisela phambili umshini Pancake kwasemuva unomsebenzi kanye platen ilungele ukulandwa pancake.
Ukusebenza Pancake umenzi akudingi amakhono akhethekile ulwazi. Ngisho abasebenzi kungekho nakho angasebenzisa umshini Pancake. Ukufundiswa kuhlanganisa nokulandela izinyathelo zokuvikeleka futhi inikeza nomhlahlandlela ngokusetshenziswa nokunakekela lisebenze.
Kufanele uqale uxhume idivayisi kunethiwekhi bese uvula ukuxoxa ngifinyelele lokushisa edingekayo. Ukuze wenze lokhu, ukuhlela isimo ezifanele. abenzi Modern Pancake ngokujwayelekile izindlela eziningana ukuze bapheke futhi bafudumale pancake ngomumo eyenziwe. Lapho ukufuthelana, LED ebomvu kufanele zikhanyise.
Lapho Pancake njengoba kufanele sekuqala ukufudumala, gcoba ukushefa ukuxubha ubuso bayo. Kungcono ukusebenzisa amafutha ajwayelekile zemifino. Khona-ke kufanele lithululwe phezu inhlama isitofu ukukuyisa a motion isiyingi.
Uma propeksya Pancake ohlangothini olulodwa, kufanele Pheqa ku wesibili. Ready Pancake roll in roll futhi ngobumnene ukudlulisela ipuleti.
Njalo amafutha agcotshisiwe ebusweni into ozikhethela wena. Engingakusho nje ngokushesha ngemva umshini kahle evuthayo futhi gcoba amafutha drive.
Ngemuva kokusebenzisa crepe umenzi kufanele ahlanze ku amathrekhi test futhi degrease.
"Mardi Gras" apharathasi
Crepes izinga ukuze isetshenziswe lochwepheshe oluqanjwe inkampani waseRussia "ATEC". Amayunithi emelelwa onobuhle eziningana nezakhi ezihlukene. Pancake umshini "Carnival" yakhelwe okusheshayo baking pancake amathilomu, izindawo zokudla kanye bistro.
Izitolo yokudlela Small ayatholakala odnokonforochnye imodeli ephethe namandla 30 pancake ngehora. onobuhle Inamandla 2 izitofu, vumela ukuba ubhake pancake 60 ngehora.
Crepe izindlu is ezenziwe ngensimbi engagqwali. Nezibhengezo zakhiwe ukushisa ukumelana cast iron nge enamathela non stick. Ububanzi ukuthosa amaqabunga 36 cm.
Kuye imodeli amayunithi, "Carnival" kungenziwa ifakwe distributor for ekusakazeni inhlama spatula for phezulu pancake.
Izici abenzi Pancake:
Stock tabletop flanging, esivikela iyunithi kusukela ingress Batter;
unamathele enamathela izitofu;
ukuthosa ububanzi enkulu;
isilawuli lokushisa kokuba ke;
Ngo baningi abenza Pancake Kazakhstan zazo ezikhishwa ngokuqinile waseRussia "sik". Bavumela wena ukubhaka pancake elingunxande, sikwele nomumo round. Ngokuba ukulungiswa ngamunye zalezi zinhlobo pancake, kunamabandla ahlukene imishini yokukopisha ezinamasondo.
"Sik" crepes Le nkampani inyathelisa onobuhle eziningana. Ukuguqulwa olula RC-1.1 ikuvumela ukubhaka pancake ukuma unxande. Idivayisi ifakwe esikhulu umile ukuthosa ebusweni ngokwenza pancake Ubukhulu 22 x 22 x 22 cm 47 cm.
Enamandla kakhulu futhi kahle le crepe RC-2.1. Umkhiqizo we umshini 280 pancake ngehora. Idivayisi ifakwe isikhunta baking imikhiqizo round, uncamane nofana ngisho sikwele.
Pancake RK apharathasi kunezinzuzo ezifana:
Usayizi compact - idivayisi akudingi eziningi isikhala kwi-desktop yakho;
yizinhlobonhlobo - kwi umenzi crepe abakwazi kuphela ubhake kodwa futhi reheat ngomumo eyenziwe pasta izitsha;
ubuncane amandla ukusetshenziswa.
Ukupheka ebusweni RC amadivayisi eyenziwe ngensimbi nge enamathela Teflon. Bath, umntwana ikalishi, futhi amathuluzi ngokusebenzisana inhlama zenziwa ukudla grade insimbi engagqwali.
Le kit ingafaka ithebula umusi for ofakwe, ingilazi iziqukathi isivivinyo nesitendi obukhethekile emashalofini futhi iminyango.
Lithengiswa namhlanje ethulwa Pancake apharathasi zokuguqulwa ezahlukene. Kukhethwa umfuziselo efanelekayo kufanele esekelwe cross-amathilomu amavolumu nalehleliwe ukukhiqizwa pancake. Ngakho, i-amathilomu amancane zokudlela efanelekayo odnokonforochnye crepes ibhukwana noma ukulawula semi-automatic. iIgama izikhungo zomphakathi ukuthi bamukele usuku ambalwa izivakashi okunengqondo ngaphezulu ukusetshenziswa dvuhkonforny Pancake othomathikhi umshini.
Okulandelayo, kufanele sinake uhlobo enamathela futhi ukuthosa ebusweni nomzimba. Kubhekwe okungcono Pancake abenzi nge cast iron ezivuthayo. Ziyakwazi ukumelana umonakalo zamakhemikhali lokukhanda.
labapheki Abaningi namakhosikazi wayezazisa yesimanje Pancake kulandzelana nekuhlunga tinsita. Izibuyekezo ogxile omuhle. Abasebenzisi bathandile lula ukusetshenziswa kanye nekhwalithi omuhle kakhulu we-pancake. Ngesikhathi Batter Pancake ngokulinganayo wake wosa futhi wokushiswa, njengoba kunjalo emapanini ezivamile.
Futhi, abathengi ziye zaphawula kahle eliphezulu imishini enjalo. Pancake apharathasi ivumela ngokuqhubekayo ukupheka pancake in inqwaba.
Abanye besifazane uthenge abenzi Pancake ukusetshenziswa ekhaya. Ngokusho kwabo, idivayisi sikaphalafini akusho luthathe isikhala kakhulu ekhishini futhi kusiza kahle ukulungiselela pancake wonke umndeni.
imibono emihle kwesokunxele abanikazi Pancake amadivayisi nge non stick enamathela. Phakathi ukuthosa inhlama asisho anamathele futhi kulula zisale ngemuva lapho udinga ukukhanyisa noma eyolanda Pancake. Ngesikhathi esifanayo ukugcina amadivayisi ehlanzekile enjalo silula.
abathengi abaningi lapho ekhetha abenzi Pancake ayethanda imodeli production ezifuywayo.
Thenga Vkontakte Kabusha
Amasevisi format ukuphrinta elikhulu. Kuyini lokhu?
Amaqiniso Basic yokukhangisa kanye nokukhangisa izinkampani yimpumelelo.
IzAga futhi amazwi aphathelene ngezenzo ezinhle mayelana ezinhle
Ihhotela Acapulco Ihhotela 4 * (Costa Brava, Spain) izithombe kanye nokubuyekeza
Kwamabhizinisi amancane: sokunquma ukufakwa 2014-2015 ,.
Ngingaba utamatisi umdlezane? Sifunda!
"Ze Bar" ... Ufa inikeza endaweni nemfashini kakhulu ukuzijabulisa
Indlela ukukhetha amagama abafana ikhalenda isonto
Motorcycle Java-250 - isimangaliso Czech
Ibhetri lithium-ion: ukuthi ungakhokhisa kanjani okokuqala. Ibhethri ye-lithiamu-ion: indlela yokukhokha kahle, izinhlobo nezincomo